Chili: Horohorontany tany Chili hitan’ny mason’ny olona · Global Voices teny Malagasy
Chili: Horohorontany tany Chili hitan'ny mason'ny olona
Voadika ny 28 Febroary 2010 20:26 GMT
Vakio amin'ny teny Nederlands, Italiano, polski, Français, Español, русский, Português, Swahili, македонски, 繁體中文, 简体中文, bahasa Indonesia, English
Santiago taorian'ny horohorontany nopihan'i pviojo CC-By
Koa satria moa efa hadiva hilentika ny masoandro dia nitombo isa ireo lahatsary mitantara ny horohoroontany nahatratra 8,8 izay nihatra tamin'i Chili tamin'ny 3:30 maraina. Koa satria moa tsy ny tanibe ihany no nisian'izany hetsiky ny tany izany dia niteraka onjan-dranomasina vaventy (tsunami) izay nanaovana fanairana manerana ireo firenena hafa manerana an'i Pasifika ny onja vaventy hidona amin'ny torapasik'izy ireo ilay horohorontany.
Nisy ny lahatsary noraisina nandritra ny nihetsehan'ny tany indrindra, tahaka ity sarina tsy mandray vola hita ao amin'ny YouTube ity. nanomboka tamin'ny fipoahana solosaina iray tao an'efitra izany, koa satria moa nihovotrovotra ny tany dia re ny firohondrohony, maty ny jiro avy eo ary dia feona vehivavy iray sy lehilahy iray sisa no heno ka heverina fa ilay lehilahy no nitana ny fakantsary sary nampitony an-dravehivavy.
Ity manaraka ity kosa dia noraisin'ilay mpampiasa YouTube taorian'ny iray amin'ny hovitrovitra:
Mbola nandrakitra ihany i Ikonsento minitra maromaro taorian'ny hovitrovitra voalohany, ka namoahany ny fikorontanana nisy tao an-tranony: mianjerazera ny fanaka sy izay rehetra ao ana-trano hahitana ny herin'ilay hovitrovitra:
Ity lahatsary ity indray dia noraisina minitra maromaro taorian'ny horohorontany voalohany, ary ity manaraka ity dia ahitana lehilahy roa vao tonga tao Chili ka niaina ilay hovitra, dia nanapa-kevitra ny handao ny tranony hijoro any ivelany mihitsy aloha. Rehefa niverina moa ny jiro dia niditra tany an-trano izy ireo ka nahita ny fahasimbana: fantson-drano vaky sy rindrina mitriatra.
Rehefa niposaka ny masoandro dia nivoaka ho eny an'arabe ny olona ka nandrakitra ny fahasimbana hitany:
Netprox namily fiara ho eny amin'ny lalambe, ary tsy maintsy nisisika tambanina tetezana nianjera.
Nivoaka ho eny an'arabe ihany koa i Rafael Vial ka nandrakitra ny tetezana nianjera tany Llaillay, Chili, izay nopihany avy tamin'ny fiantso findainy narakitra tao amin'ny Qik.
Tapaka moa ny fifandraisana tany amin'ny faritramaro nanerana an'i Chili ka sarotra ny nahazoana vaovao tany amin'ireo olom-pantatra ho manao ahoana izay izy ireo. Ireto ampela roa ireto dia nanararaotra ny tombony azony tamin'ny YouTube ka nandrakitra ny lahatsariny, izay ilazany amin'ny olom-pantatra sy ny namana fa tsy maninona izy ireo, ary mitantara ihany koa izay hita sy ren'izy ireo tamin'ilay hovitrovitry ny tany:
Ary ny hafa kosa tao anatin'ny hetaheta te-hanampy no namoaka vaovao manan-danja milaza izay tokony hatao mba ahafahana miaina ela araka izay azo atao raha toa voatery ao ambanina trano nirodana. Tahaka ny amin'ity lahatsary ity izay noraisina taorian'ny horohorontany. ny Petra-kevitry ny telozoron'ny fiainana dia mametraka fa ny toerana tsara aro indrindra amin'ny horohorontany dia tsy ny miafina ao ambanin'ny fanaka fa ny eo akaikina fanaka matanjaka: amin'izay fotoana izay rah amisymianjera amin'ilay fanaka dia tsy hianjera io ary tsy hitontona amin'izay olona miafina aminy.Amin'izay fotoana izay dia avotra amin'ny alalan'ireo paosin-dalana naterak'ireo zavatra ireo ilay olona. Ity lahatsarim-panentanana izay nadika sy namboarina ho amin'ny teny espaniola ity no manazava fa tsy mahavonjy anao izany miafina ambanin'ny latabatra na eny an-tolàna izany.